Hiran State - News: Wakiilka Hiiraan State ee Uk oo dib ugu soo laabtay London.
Wakiilka Hiiraan State ee Uk oo dib ugu soo laabtay London.
HS:-Wakiilka Hiiraan State ee Uk oo dib ugu soo laabtay London kadib howlo shaqo oo uu ku tagay Somalia.
Wakiilka dowlad goboleedka Hiiraan State ee Uk Cismaan Raage Saney ayaa dib ugu soo laabtay magalada London kadib howlo shaqso ah oo uu maalmahani ugu maqnaa Somaliya. wakiilka oo mudadii uu ku maqnaa safarka gudaha Samaliya kula soo kulmay madaxweynaha Hiiraan State iyo qaar ka mid ah golaha wasiirada HS sida wasiirka dib u heshiisiinta iyo wasiirka caafimaadka mudadii uu ku guda jiray howlahiisa shaqo.
Mudane Cismaan Raage oo uu xilkaan horey ugu magacaabay madaxweynaha Hiiraan State ayaa lagu wadaa inuu dhawaantan dalka Ingiriiska ka furi doono xafiis laga maamulo howlaha dowlad goboleedka HS. intii uu joogay Somaliya ayuu warbixin ka siiyey madaxweynaha iyo wasiiradii uu kul asoo kulmay halkaasi waxii u qabsoomay tan iyo waxii ka danbeeyey markii xilkaan loo magacaabay.
Sidoo kale waxaa dhawaantaan lagu wada in la magacaabo wakiilka bariga Africa u fadhiya dowlad goboleedka Hiiraan State kaasi oo ay howshiisa noqon doonto ka qeyb galka shirarka lagu mideynayo reer Hiiraan iyo xiriirka maamul goboleedyada kale waxii ay uga baahdan HS iyadoo dhawaantan Yurub iyo bariga africa uu maamul goboleedka HS ka furan doono xafiisyo qaabilsan maamulka HS.
Hadaba waxaanu wareysi dhinacyo badan taabanaya ka soo diyaariney wakiilka UK Osman Raage filo markasta.
· admin on November 01 2011 14:53:39 · 0 Comments · 1972 Reads ·
14,612,360 unique visits